जुम्रा किन पर्छ? | Ratopati
जुम्रा किन पर्छ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeपुस २१, २०७५ chat_bubble_outline0
केही दिनअघि मात्र मेरो भान्जा टाउको चिलायो भन्दै म बसेको ठाउँमा आयो । मैले पनि के भएको रहेछ भन्दै उसको टाउकोमा हेर्न थाले । यसो नियालेर हेरेको त उसको टाउकोमा त जुम्रा पो परेको रहेछ ।
किनभने जुम्रा एउटा बच्चालाई पर्यो भने अरु बच्चाहरुलाई पनि त्यो अति चाँडो र सजिलै सर्ने गर्छ । स्कूलमा धेरै विद्यार्थीहरु हुन्छन् । त्यसैले एउटा विद्याथीलाई जुम्रा प-यो भने त्यही कक्षाका अन्यलाई पनि सर्न सक्छ ।